Air Mauritius kwadoro na ọ ga-amaliteghachi ụgbọ elu na Seychelles mgbe afọ 15 gachara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Mauritius kwadoro na ọ ga-amaliteghachi ụgbọ elu na Seychelles mgbe afọ 15 gachara
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Presslọ ọrụ mgbasa ozi Mauritian kwenyere na Air Mauritius ga-alaghachi Mahé bụ isi agwaetiti nke Seychelles. Ọ bụ ọtụtụ izu kemgbe asịrị ahụ na-agbasa, na n'ikpeazụ saịtị akụkọ nke MBC (Mauritius Broadcasting Corporation) gosipụtara akụkọ ahụ.
"Prem Sewpaul, isi nke nkwukọrịta na Air Mauritius ekwenyela na akụkọ a."
Ndi Seychelles News Agency (SNA) akpọtụrụla Air Mauritius ka ha mara mgbe ụgbọ elu nke Air Mauritius ga-amalite ife efe mana agwara ha na maka ugbua ahịa adịbeghị.
SNA kpọtụrụ ndị ọrụ ụgbọelu nke Seychelles, nke gosikwara mbata nke Air Mauritius, nke ga-abụ ụbọchị abụọ nke Air Seychelles ejikọghị agwaetiti abụọ ahụ.
"Air Mauritius agwala anyị banyere ebumnuche ha ịmaliteghachi mmekọrịta na Seychelles na July, mana anyị enweghị nkwenye," ka Florence Marengo, bụ onye isi nke ngalaba ụgbọ njem na Seychelles Civil Aviation Authority (SCAA) kwuru.
Agbanyeghị, n'akụkụ Seychellois onye Mịnịsta nke Ọdụ ụgbọelu, Didier Dogley kwuru n'izu gara aga na ọ nweghị ihe ọchịchị ọ bụla, mana ọ matara na ndị nnọchi anya ndị Mauritania nọ na mba ahụ.
O kwuru na nnọkọ ogbako na ọ bụrụ na ekwenye na nke a agaghị abụ ozi ọma maka Air Seychelles.
Ọbịbịa nke Air Mauritius ga-amasị ndị njem, ndị nwere olile anya maka ọdịda nke tiketi ụgbọ elu.
Companylọ ọrụ Seychellois Air Seychelles bụ naanị ụgbọ elu na-eme njikọ a ma ọ nwere ike ugbu a nyochaa ọnụahịa ya bụ nke dị ugbu a 400 € maka awa abụọ nke ụgbọ elu.
Air Seychelles, na-agbake site na ọnwụ, nke gọọmentị Seychelles nwere itinye ego, dabere na njikọ a na atụmatụ mgbake akụ na ụba ya.
Air Mauritius, nke na-ejikọ ya na Seychelles, kpebiri ihe karịrị afọ 15 gara aga ịkwụsị, n'ihi ebumnuche akụ na ụba.
ụgbọ elu obodo ndị ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ ụgbọelu nkwurịta okwu ogbako nkwenye kwadoro Corporation ugbu a ụbọchị kpebiri ndị nnọchiteanya ngalaba eme dobe aku mgbake akụ na ụba chọta Florence ofufe site mma ozi ọma isi olileanya awa mara ebumnuche agwaetiti onye ozi njikọ losses Mahé Main Mauritius onye ozi ukara ụgbọelu atụmatụ Press pịa ogbako price ahịa mgbake malitegharịa maliteghachi ụgbọ elu nloghachi review sales Ọchịchị Seychelles Seychelles saịtị Kwụsị Mịnịsta Seychelles tiketi gwara iga ụbọchị abụọ izu izu